Luxury 100% Mink Fur False Eyelash False Strip Mink Fur Lashes 3D Mink Lashes Manufacturers and Factory - Wholesale Pricelist - Uhair
Luxury 100% Mink Fur False Eyelash False Strip Mink Fur Lashes 3D Mink Lashes
100% mink fur eyelashes bring you beauty and health.Custom packaging is available.
1.100% Real Mink fur eyelashes
Momba ny felam-bongonay mipetaka amin'ny hoditra, izy ireo dia 100% Genuine 1-2 taona taona volo fotsy maina izay miala amin'ny voajanahary. Mampanantena izahay fa tsy manao zavatra hafa amin'ny biby.Kely azo antoka ho an'ny fampiasana olona miaraka amin'ny fanasitranana tanteraka Ho an'ny kiraro. Ary 1 pair dia azo ampiasaina efa mihoatra ny in-30 mahery ho toy ny vaovao, midika izany fa $ 0.15 isaky ny fotoana, Natural sy mora fampiharana. Vazivazy ara-potoana dia tsy miovaova ny zavatra tavela sy ny maso havanana na ny antonta samihafa ary ny bandonintsika manimba ny hoditra.
Ho an'ny kirikitika simensy 3D, dia ampiasaintsika fotsiny ny fitsaboana amin'ny fiterahana Koreana PBT izay fitaovana tsara indrindra amin'ny tsena ary manana MSDS amin'ity fitaovana ity isika. Azo ampiasaina hatramin'ny avo 20 isam-bolana toy ny vaovao izany. Ny teknolojia Advantista dia afaka miantoka ny fikojakojana ny lozam-pifamoivoizana 3D mandritra ny herintaona tsy misy fanovana.
Ny fipoahan-kase lehibe dia mifanohitra amin'izay mety ho hita sy ny maso havanana na antoko samihafa ary ny marika kodiaranay dia tsy manimba ny hoditra.
Azontsika atao koa ny mampifanaraka ny fako sy ny fonosana mifanaraka amin'ny fepetra takiantsika.
Hot Tags: luxury 100% mink fur false eyelash false strip mink fur lashes 3d mink lashes, manufacturers, factory, wholesale, pricelist, quotation, cheap, discount, free sample, top selling, most popular, factory price, hot fashionable colored, free shipping, large stock, fast delivery, product catalog